ग्राहक टिप्पणीहरू | 東京と福岡の入国管理局へのビザ申請なら東京福岡ビザ申請代行センター
हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यबाद। हामी तपाईंको टिप्पणीहरू पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई पोस्ट गर्नेछौं।
श्री एच (कोरियाली नागरिक)
कागज र आवेदन प्रक्रिया मैले अपेक्षा गरेको भन्दा चाँडो पूरा गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईंको सेवा संग धेरै खुसी छौं। प्रतिक्रिया एकदम नम्र थियो र स्पष्टीकरणहरू बुझ्नको लागि सजीलो थियो, त्यसैले हामी यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म विश्वासमा उनीहरूमा छोड्न सक्दछौं। मुरी मुरी धन्यवाद।
श्री एस (चिनियाँ नागरिक)
मैले जापानमा काम गर्ने सपना देखेको थिएँ र कडा परिश्रम गरें, तर जब मलाई इमिग्रेशन ब्यूरोले अस्वीकार गरेको सूचना प्राप्त भयो, म अन्तमा जान्छु भनेर मैले सोच्ने सोचें, तर मेरो एक साथीले मलाई श्री नोमुरासँग परिचय गराए। । मैले त्याग्ने ’boutमा सोचेँ, तर मेरो एक साथीले मलाई श्री नोमुरासँग परिचय गराए, र अन्तिममा मैले एउटा मौका लिएँ र जूवा लिएँ, र यो ठूलो निर्णय भयो। उहाँ राती अबेरसम्म मसँग बस्नुभयो र मलाई सिकाउन र मेरो लागि धेरै चीजहरू ठीक गर्न कोमल दयालु हुनुहुन्थ्यो। तपाईंको सहयोगका लागि धन्यबाद, मेरो भिसा सुरक्षित रूपमा स्वीकृत भयो। यदि तपाईंलाई कुनै समस्या छ भने, कृपया मसँग फेरि सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
श्री टी (भारतीय नागरिक)
म तपाईंलाई मेरो साथीको लागि काम भिसा प्राप्त गर्नका लागि सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले एउटै काम गर्ने ठाउँमा चिनियाँलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्‍यौं, त्यसैले हामीले भिसाका बिभिन्न विषयहरूमा ध्यान दियौं, तर आफैंबाट यो पत्ता लगाउन हामीलाई गाह्रो भयो। म अध्यागमन कार्यालय जान धेरै चिन्तित थिए। ऐ समर्थनका लागि धन्यबाद, मैले अध्यागमन कार्यालयमा जानुपर्दैन र गाह्रो कागजातहरू भर्नु पर्दैन। मेरो साथीको तर्फबाट, म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
श्री सी (चिनियाँ नागरिक)
हामी यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं कि हामीले तीन जना चिनियाँलाई सफलतापूर्वक काममा लिएका छौं जो हाम्रो कम्पनीले रोजगारीमा लिनेछ। हामी तपाईको सहयोगको लागि साँच्चिकै आभारी छौं। यदि हामीले अर्को अवसर प्राप्त ग .्यौं भने, हामी निश्चित रूपमा तपाईंको सहयोगको लागि सोध्नेछौं। हामी तपाइँसँग फेरि काम गर्न अगाडि हेर्दछौं।
श्री आर (कोरियाली नागरिक)
तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद, हामी पति र पत्नीको रूपमा जापानमा सँगै बस्न सक्षम भयौं। मेरो विगतको क्यारियरको कारण, मैले सोचें कि यसले काम गर्दैन, तर मैले बोझिला प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्‍यो जुन मैले पाएको हेरचाहको लागि लायक थियो र म विश्वास गर्दछु कि आज म कहाँ पुगेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया राम्रो काम जारी राख्नुहोस्।
श्री पी (थाई नागरिक)
अर्को दिन तपाईको सहयोगका लागि धेरै धन्यबाद, म मेमा जापान आइपुगें र अब मेरी श्रीमतीसँग बस्दैछु। यो मेरो श्रीमतीको उपहार हो। सबैलाई साझेदारी गर्नुहोस्। अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यबाद!
श्री सी (फिलिपिन्सबाट)
म आश्चर्यचकित छु कि परमिट मैले सोचे भन्दा चाँडो प्रदान गरियो। मुरी मुरी धन्यवाद। भविष्यमा, मेरी श्रीमती पनी स्थायी रेसिडेन्सी प्राप्त गर्न चाहान्छन्, त्यसैले म तपाईंलाई त्यो मामलामा फेरि सोध्छु।
श्री आर (अमेरिकी नागरिक)
यस विषयमा तपाईंको सहयोगका लागि धेरै धन्यबाद। मैले पहिलो आवेदनको लागि अर्को प्रशासकीय सहायकको लागि अनुरोध गरें, तर मैले केही महिना उहाँसँग सम्पर्क गर्न सकेन। केहि दिन पछि मैले जारी नगरीएको सूचना पाउँदा म निराश भएँ र छोडिदिने ’boutमा मैले सोचेँ। यस पटक मैले विभिन्न वेबसाइटहरू तुलना गरें, र वेबसाइटमा स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट थियो र शुल्क स्पष्ट थियो। नतिजा स्वरूप, मैले आवासको स्थिति मैले सोचेभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्षम भयो, जुन झूट थियो ’cause मैले पछिल्लो पटक महिनौं कुर्नु पर्ने थियो। म धेरै राहत पाएको छु। म वास्तवमै खुसी छु, मैले यसलाई डा। नोमुरामा छोडे। मुरी मुरी धन्यवाद।
सुश्री सी (चिनियाँ नागरिक)
मेरो श्रीमान्, जो चिनियाँ हुनुहुन्छ, भिसा प्रक्रियामा हामीलाई सहयोग गरेकोमा धन्यबाद। यो आफै गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो थियो, त्यसैले हामीले सहयोगका लागि अनुरोध ग asked्यौं तर उनीहरूले द्रुत प्रतिक्रिया देखाए र धेरै सहयोगी भए। सहयोगको लागि धन्यबाद।
श्री ए (कोरियाली नागरिक)
सुरुमा मैले यो आफैं गर्न प्रयास गरें, तर यस्तो लाग्यो कि यो यस्तो हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दैन, र मलाई खुशी छ कि मैले मेरो लागि यो गर्न डाक्टरलाई भने! यो अन्तर्वार्ताको लागि हुन धेरै उपयोगी थियो। म भविष्यमा तपाईसँग काम गर्न अगाडि छु।
श्री के.टी. (चिनियाँ नागरिक)
तपाईंलाई सम्पर्क गर्नमा ढिलाइ भएकोमा माफ गर्नुहोस्, तर मैले मेरो प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरें। हाम्रो विवाहको विवरणको ’boutमा धेरै प्रश्न सोध्न मैले तिनीहरूलाई चीनबाट बोलाएँ, तर तिनीहरू मलाई सहयोग गर्न अत्यन्त दयालु थिए। म यसको कदर गर्छु मुरी मुरी धन्यवाद।
श्री एस.यू. (मंगोलियन नागरिक)
मेरी श्रीमती सुरक्षित जापान आउन सक्षम थिए, र यो लगभग एक पटक असफल हुँदा मेरो मुटु तोड्यो। मुरी मुरी धन्यवाद। अब काश मैले सुरुबाट नै तपाईंको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थिएँ। म पक्का छु कि हामी तपाईंलाई साइट पुन: अद्यावधिक गर्ने बेलामा तपाईंलाई फेरि मद्दत गर्न सक्षम हुनेछौं, तर तपाईंको सहयोगका लागि धन्यवाद।
श्री साकामोटो (चिनियाँ नागरिक)
मेरो साथी गर्भवती थिई र जापानमा बच्चा सुम्पिन हामीसँग एकछिन पनि समय थिएन, तर हामी यसलाई छिटो र छिटो गर्न सक्षम भयौं। उनीहरूले यसलाई सम्हालेको तरीकाले धन्यवाद, म जापानमा अनुमति लिन र जन्म दिन सक्षम भएँ। मलाई सम्पर्क गर्नमा ढिलाइका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
श्री सुजुकी (थाई नागरिक)
टिकटको व्यवस्था र उडान कसरी गर्ने विवाह प्रक्रियामा कसरी जाने भनेर, मैले भिसाबाट प्राप्त गरेको विस्तृत जानकारी मैले भिसा नपाएसम्म आश्वासन दिइरहेको थियो। मलाई भिसा बाहेक अन्य कुराहरुको ’boutमा धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएकोमा माफ गर्नुहोस्, तर यो अत्यन्त उपयोगी थियो। तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
सुश्री एन्डो (भारतीय नागरिक)
जब म धेरै काममा थिएँ, म सधैं उहाँसँगै चिन्तित थिएँ, तर मलाई सुरक्षित रूपमा अनुमति दिइयो तपाईंको सहयोगको लागि धन्यवाद, हामी हाम्रो जीवन शान्ति र मर्यादामा बाँच्न सक्दछौं, यदि यो सामान्य व्यक्तिहरूको लागि पनि हो भने पनि म खुशी छु। त्यसो गर्न सक्षम हुन। धेरै धेरै धन्यवाद।
टेक्निकल इंटर्नशिप भिसाबाट जीवनसाथी भिसामा परिवर्तनको ’boutमा (टेक्निकल इन्टर्नसँग विवाह)
प्राकृतिकीकरण अनुप्रयोगको ’boutमा
मनोरन्जन भिसाको ’boutमा (निवास स्थिति “मनोरंजन”)
शरणार्थी मान्यता प्रक्रियाको ’boutमा